နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: မျောလွင့်...
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:03 AM
ချစ်စံအိမ် August 5, 2012 at 3:03 PM
Anonymous October 7, 2013 at 6:31 AM
နွေဆူးလင်္ကာ August 6, 2012 at 12:33 AM
တောင်တန်းတွေ .. ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန်ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ပင်လယ်တွေက ငြိမ်သက်နေပြီး တောင်တန်းတွေကသာ လှုပ်ရှားနေတာတဲ့ ...။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် August 6, 2012 at 12:46 AM
ညလင်းအိမ် August 6, 2012 at 6:12 AM
တောင်တန်းတွေပဲ သိတဲ့ ငါ့ဘ၀မှတ်တမ်း ...
မိုးနတ်ကြယ်စင် August 6, 2012 at 7:36 AM
တကယ်ကြီးလား...နွေဆူးရေ....ဆရာကအဲလိုပဲရေးထားတာလား? ပင်လယ်တွေက ငြိမ်သက်နေပြီး တောင်တန်းတွေကသာ လှုပ်ရှားနေသတဲ့လား...အို..အို ...စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်....
sulay August 6, 2012 at 9:55 PM
စိတ်ရှိတိုင်း အတွေးနယ်နင်ပြီး ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးကတော့
အိမ်မက်ကောင်းကင် August 7, 2012 at 12:24 AM
"သစ်ရွက်တွေ ကြွေ ......
စိတ္တဇ ပန်းချီတစ်ချပ်လား.....? " သည်အပိုဒ်လေးက တော့ရင်ကိုထိတယ်
မိုးသူ(တောင်ကြီး) August 7, 2012 at 2:33 AM
မိုးညချမ်း August 7, 2012 at 5:56 AM
ငါမဖြန့်ချင်တော့ဘူးကွယ်.......။) ... တစ်ကယ်ကိုခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဘ၀လေးအတွက် မီးပူတိုက်လို့ ပြန်မဖြန့်ချင်တော့ပါဘူး မမရယ် ... :)
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) August 7, 2012 at 6:45 AM
အချစ်ရဲ့ဒဏ်ဆိုတာ တော်တော်နဲ့တော့ ဖျောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့လေ။
mstint August 8, 2012 at 8:38 AM
ရိုးမြေကျ October 3, 2012 at 9:12 PM
Moe Nya February 21, 2015 at 7:25 AM
Ko Kp May 28, 2017 at 9:09 AM